Taorian’ny fandraràna mananasy, fikan’antitra no iantsoan’i Taiwan an’ilay tolotra fampiasambola vaovao nataon’i Beinjing ho an’ny fambolena · Global Voices teny Malagasy
Fepetra antsoina hoe 'poizina mamy' ikendrena hangalarana ny traikefam-pambolen'i Taiwan
Voadika ny 24 Marsa 2021 15:27 GMT
Traikefa manokana ananan'i Taiwan ny fambolena ny wax apples (paoma savoka). Pikantsary avy amin'ny PTS – fampielezampeom-panjakàna ao Taiwan.
Taorian'ny 26 Febroary nandraràny ny fanafàrana mananasy avy any Taiwan, manolotra fandrisihana ara-bola ho an'ireo mpamboly sy mpitrandraka ala ao Taiwan indray izao i Beijing mba ho fampiroboroboana ny fizahantany mifototra amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena ireo voly natao ho an'ny tsena avo lenta miampita ny helodranon'i Shina, toy ny dite, ny voankazo ary ny voninkazo.
Ny 17 Martsa, nanambara fepetra 22 i Beijing izay ahitàna ny fahafahan'ireo orinasa mpisehatra amin'ny fambolena avy any Taiwan mahazo ireo tany fambolena sy ala ao Shina. Hita ao anatin'ilay fehezana ihany koa ny fanohanana ara-bola, ara-toekarena ary ny fiarovana ny fotodrafitrasa ho an'ny fampiasan'izy ireo ny volany any Shina.
Ho valin'izany tolotra manome tombony izany anefa, nolazain'ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Taiwan fa fikan'antitra io:
Vao avy namboraka fepetra 22 i #Beijing hisarihana ny fampiasambola avy aty #Taiwan ho amin'ny fampiroboroboana ny fambolena avo lenta any #Shina. Noraràn-dry zareo ny #FreedomPineapple avy aty amintsika, ankehitriny mihevitra ry zareo fa azony atao ny manongotra hatrany ifotony ny sehatry ny fambolentsika. Tsy toa efa mahazatra ve izany? Tsy hanadala antsika io fikan'antitra io. Tsy adala sy vendrana akory isika. JW
— 外交部 Minisitgry ny Raharaha Ivelany, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 17 Martsa 2021
Nolazain'i Chen Ting-fei, mpanao lalàlana ao Taiwan, fa “poizina mamy” ireo fepetra ireo, natao hangalarana ny traikefa avo lenta ananan'i Taiwana amin'ny sehatry ny fambolena, teknolojia ary ny ny fanandramana. Iray hafa mpanao lalàna, Lai Jui-Lung, niampanga an'i Shina ho mampiasa ny tetikady “vokiso, fandriho dia vonoy” mba hakàna ny tsenan'ny fambolena ananan'i Taiwan any ampitn-dranomasina.
Manoloana ireny ahiahy ireny, nilaza ny Filankevitry ny Fambolena ao Taiwan (COA), fa mety hametraka volavolam-panitsiana iray amin'ilay Lalàna Momba ireo Karazana Zavamaniry sy Masomboly, raha ela indrindra dia ny volana Jona, mba hisorohana ny fivoahan'ireo voankazo, “cultivars”, ary ny teknolojiam-pambolena, tsy ho lasan'i Shina.
Ny fanapahankevitr'i Beijing hampiato tampoka ny fanafarana ireo mananasy avy ao Taiwan tany amin'ny faran'ny volana Febroary dia nanery olona maro hieritreritra momba ny politikam-pambolena ao Taiwan.
Ny profesora Chen Shih-shiung, filohan'ny fikambanana mampiroborobo ny fambolena biôlôjika ao Taiwan nilaza tamin'ny mpanangona vaovaon'ny Liberty Times fa nandritra ireo taompolo farany, indrindra fa nandritra ny vanimpotoana teo anelanelan'ny 2008-2016 fony ny Kuomintang an'i Ma Ying-jeou no teo amin'ny fitondrana, dia karazana miisa 2.500 tamin'ireo vokatra ara-pambolena no naondran'ny sehatry ny fambolena avy tao Taiwan ho any amin'ny faritanin'i Fujian any Shina, tao anatin'izany ny voankazo, ny voninkazo ary teknôlôjiam-pambolena nanana fizakàmanana niisa 800 sy ireo traikefa ary fahaizamanao amin'ny fiompiana sy ny voly anaty rano. Mbola nisy tahàka izany famindràna fahaizamanao ara-pambolena sy teknôlôjia izany ihany koa natao tany amina faritany hafa tao Shina ary farany, dia nalain'i Shina ireo tsena fanondranan'i Taiwan vokatra ara-pambolena tany ampitan-dranomasina, toa an'i Japàna.
Taorian'ny 2008 nandraisan'i Ma ny biraony, nampiroboroboiny ny fifandraisana akaiky ara-toekarena tamin'i Shina. Talohan'ny nanaovan'i Taiwan sonia ilay Fifanarahana Lasitra Ara-toekarena Mamakivaky ny Helodrano iarahana amin'i Shina, efa takatr'ireo manampahaizana manokana avy amin'ny sehatry ny fambolena ny fiantraikany ratsy aterak'io amin'ilay sehatra. Ohatra, ny profesora Yang Ping-shih, zokiolon'ny Anjerimanontolo Nasiônaly ao Taiwan momba ny Loharanonkarena ‘bio‘ sy ny Fambolena, dia naminavina fa mety vao mainka hanaratsy ny fatiantoka ara-barotra eo amin'i Taiwn sy Shina ilay fifanarahana, satria ny sandan'ny tany sy ny asa ao Shina dia mora be tokoa.
Notanisain'i Yang ho ohatra ny fampitàna ny traikefa momba ny fiompiana amalona ary notsipihany fa 10 taona taorian'izay dia resin'i Shina i Taiwan taorian'ny nanombohan'ireo mpanjono avy ao Taiwan nampiasa vola tamin'ny fiompiana amalona tany amin'ny tanibe Shina, tany am-piandohan'ny taona 1990. Tamin'ny 2008, nitentina 760.000 dolara amerikàna ireo amalona nafaran'i Taiwan avy any Shina, raha nilatsaka ho any amin'ny aotra kosa ny fanondranana nataony nankany Shina tamin'io taona io ihany.
Niverimberina io tantaran'ny fiompiana amalona io tato anatin'ny taompolo farany. Chang Chin-I, tale lefitry ny Ivontoerana Fikarohana ny Harena Anaty Rano nilaza fa taorian'ny nandaniana taompolo iray nanaovana fikarohana momba ireo ‘mérous’ vaventy, vitan'ilay ivontoerana ihany nony farany tamin'ny 1997 ny niompy ilay karazana . Kanefa, tamin'ny 2008, nomen'ny governemanta alàlana ny sehatry ny fiompiana anaty rano ho afaka mampiasa vola any amin'ireo toeram-piompiana goavana any Shina, ary tamin'ny 2012 nihoatra lavitra noho ny an'i Taiwan no sady nibahana ny tsena ny vokatr'i Shina tamin'ireo karazana ‘mérous’ vaovao.
Nandritra ireo taompolo roa farany, nisy ihany koa ny fampitàna traikefa ho an'ny tanibe Shina momba ny fahaizamanaon'i Taiwan amin'ny fambolena ny mananasy mivolom-bolamena, ny goavy mavo, ny paoma savoka, ny paoma mamy, ny manga ary ny orkide lolo ary farany, ny endrika voankazo sy voninkazo avy any Shina no nameno ny tseana, ary amin'ny vidiny tena mora kokoa.
Manoloana ny toedraharaha tahaka izany, na maharakotra tombontsoa maro aza ireo fepetra 22 napetraka hisarihana ireo mpandraharaha ara-pambolena avy any Taiwan mba hanitatra ny fampisambolan-dry zareo any amin'ny tanibe Shina, mbola mitandrina be ilay sehatra. Huang Wen-hong, mpandraharaha avy ao Taiwan, izay manana traikefa amin'ny fitantanana toeram-piompiana any Fujian, nilaza tamin'ny New Market, media tsy miankina ety anaty tambajotra, fa kely ny finoany amin'ilay politikan'i Beijing,
Marina fa hanome ampahantany goavana ho anareo ny governemanta shinoa, saingy tsy maintsy mampiasa vola be ianareo mba hanatsarana sy hanamasahana ilay tany. Avy eo, ianaran-dry zareo ny traikefanao ary tsy ela dia ho very ny soatoavina sy ny lanjanareo… azon-dry zareo ovaina araka izay itiavany azy ny politikany. Mety hanamboatra fialàna bala ry zareo hakàny indray ny tany na hanapahana ny famatsiana jiro sy rano mankao aminao.
Raha ny governemanta ao Taiwan nanomboka nanamafy ny lalànany miady amin'ny fivoahan'ireo vokatra sy teknolojia momba ny zavamaniry tsy misy afa-tsy ao aminy tsy ho any Shina, toa hampihena miandalana ny fiankinandohany amin'ny tsena shinoa ny sehatry ny fambolena ao Taiwan ary hanamaro karazana ny tsenany any ivelany.